लुम्बिनीमा पञ्चशील पालना- विचार - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीमा पञ्चशील पालना
सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र लुम्बिनी नगरपालिकालाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा गरिएको हो भने लज्जास्पद हुनेछ ।
मंसिर ११, २०७५ वसन्त महर्जन
काठमाडौँ — गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीबाट नामकरण गरिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बुद्ध धर्ममा पञ्चशील भन्नाले हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, झुठो नबोल्ने, व्यभिचार नगर्ने र नशालु पदार्थ सेवन नगर्ने प्रण हो । यो सामान्य बौद्धहरूले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम नियम हो ।
पञ्चशील बौद्धजनका लागि अनिवार्य भए पनि अरूसँग असम्बन्धित भने होइनन् । पञ्चशील क्षेत्र घोषणालाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
लुम्बिनी नेपाली गौरव हो । तत्कालीन कपिलवस्तु गणराज्य अन्तर्गत पर्ने लुम्बिनी वनमा ईशापूर्व ५६३ वैशाख पूर्णिमाका दिन भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो । कालान्तरमा यो क्षेत्र बौद्धहरूका लागि तीर्थस्थल बन्यो । स्वयं बुद्धबाट यस क्षेत्रलाई अत्यन्त सम्वेदनीय स्थलका लिनुपर्ने आज्ञा भएको थियो ।
उति बेलादेखि बौद्धहरूले यसलाई सम्वेदनीय स्थलकै रूपमा ध्यान भावना तथा भगवानप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दै आइरहेका छन् । लुम्बिनी त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाका कारण पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र बनेको छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यका आधारमा महत्त्व दिई संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिसकेको छ । अहिले अन्य धर्मावलम्बीका लागि पनि लुम्बिनी आकर्षणको केन्द्र हुनथालेको पाइन्छ ।
लुम्बिनीलाई भूगोलको एउटा टुक्रा वा पर्यटकीय स्थलका रूपमा मात्रै बुझ्नु र बुझाउनु ठूलो भुल हुन्छ । यस क्षेत्रले ग्रहण गरेको अर्थ भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । बौद्ध बाहेक अन्यले पनि सोही अर्थमा यसलाई महत्त्व दिने हुन् । बुद्ध र बौद्ध विषय–वस्तुबारे जान्ने–बुझ्ने मनसायले तिनीहरू बौद्ध स्थलमा आउने हुन् । लुम्बिनी लगायत बौद्ध स्थललाई बौद्ध वातावरणले युक्त गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनीको अवस्था सधैं एकनासको पाइएन । कुनै बेला राजकीय उद्यानका रूपमा रहेको लुम्बिनी वन पछि धार्मिक क्षेत्र हुनपुग्यो । पछि उजाड मात्र भएन, विस्मृतिको गर्तमै विलिन हुन पुग्यो । प्राप्त साहित्यका आधारमा खोजी कार्य हुँदा सम्राट अशोकद्वारा राखिएको अभिलेख सहितको शिलास्तम्भ भेटिएपछि लुम्बिनीको पहिचान यस स्थलमा भएको हो ।
लुम्बिनीको पहिचान भएर समाचार संसारभर फैलिसक्दा पनि यसको संरक्षण तथा विकासमा खासै ध्यान पुर्‍याउन सकिएको थिएन । यस्तो परिस्थितिमा विश्वले नेपालप्रति गुनासो गर्ने तथा चित्त दुखाउने कार्य पनि नभएको होइन ।
सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरी त्यहाँको वस्तुस्थितिमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विकासका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्र समक्ष अनुरोध गर्नुका साथै आफ्नै पहलमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेपछि लुम्बिनीको विकासले गति लिएको मान्नुपर्छ ।
लुम्बिनीको विकासका सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघकै पहलमा गुरुयोजना बनेको थियो । सो गुरुयोजना अनुरूपका विकास निर्माण ढिलै सही तर भइरहेका छन् । यसको रेखदेख गर्न लुम्बिनी विकास कोष नामक एउटा स्वायत्त संस्था पनि छ ।
प्रबुद्ध बौद्ध जगतले भौतिक निर्माणमा मात्र नभएर अन्य कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा पहिल्यैदेखि जोड दिँदै आइरहेको थियो । लुम्बिनी जाने बाटोको रक्सी कारखाना चर्को विरोधपछि हटाइयो । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् ।
लामो समयको बहुपक्षीय सहकार्य र सम्झौतापछि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा लुम्बिनी विकास कोषले पञ्चशील क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा पञ्चशील पालनालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बौद्ध जनको ठूलो माग थियो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु एक तहको कार्य हो । अर्को तहको कार्य नीति–नियमले नभएर व्यक्ति आफै शील पालनामा लाग्नु हो । जमिनमा पाइला टेक्दा घोच्छ भनेर पूरा जमिनमा मुलायम सामग्री ओछ्याउन गार्‍हो होला, तर व्यक्तिले जुत्ता लगाएर हिँडे समस्या समाधान हुन्छ । यो प्रज्ञासँग पनि सम्बन्धित कुरा हो । नगरपालिकाले पूरा क्षेत्रलाई पञ्चशील क्षेत्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । पञ्चशील पालना गर्न उत्साहित पार्ने दायित्व अब नगरपालिकाको हो ।
पञ्चशीलका सन्दर्भमा बौद्ध जगतभित्रै पनि अतिवादी प्रवृत्ति पाइन्छ, जसबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । कसले कति शील पालना गर्‍यो वा गरेन भनेर चियोचर्चा गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति सही होइन । यही कुरालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप गर्दै हिँड्दा द्वेषभावना विकास हुनुका साथै मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जनामा नकारात्मक असर पर्छ । शील पालना गर्नलाई हो, देखाएर हिँड्न होइन भन्ने कुरा सदैव मनमा राख्नुपर्छ ।
एक व्यक्तिले एकैचोटी सबै शील अक्षरश: पालना गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राम्रै भए पनि व्यावहारिक होइन । हेर्दा पाँचवटा नियमजस्तो लाग्छ, तर पालना गर्ने बेला जीवनका कति धेरै पक्षलाई समेटेको हुन्छ भन्ने अवबोधि हुन्छ । यो पक्का हो, एउटा शीलको पालनाले अर्को शीलको पालनामा सघाउ पुर्‍याउँछ र शील पालनाले जीवनका धेरै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । यसलाई अन्य नीति–नियमजस्तो दण्ड–जरिवाना तथा नसिहतको माध्यमबाट पालना गराउन सकिन्न ।
शीलको प्रचार–प्रसार गर्ने, पालनामा जोड तथा प्रोत्साहन दिने गर्नाले सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ । सबै शील पालना गर्न नसकिए पनि जति सकिन्छ, त्यति पालना गर्दै जानु र त्यसबाट प्राप्त सकारात्मक परिवर्तनबाट प्रोत्साहित भएर अरू थप शील पालनामा अग्रसर हुनु व्यावहारिक पक्ष हो । उदाहरणका लागि विगतमा जीव हत्यालाई घटाउँदा जुन आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यसले जीव हिंसाबाट विरक्त हुन धेरै मात्रामा सघाउने हुन्छ ।
गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेगस्थित चुम उपत्यकामा पञ्चशील पालनाको अभ्यास स्मरणीय छ । बौद्ध धर्मावलम्बीको बर्चस्व रहेको त्यस उपत्यकामा पञ्चशील पालनामा जोड दिइनु स्वाभाविक हो ।
उपत्यकामा सबै शीललाई कडाइका साथ लागु नगरिए पनि पहिलो जीवहिंसा नगर्ने शीललाई भने सयौं वर्ष अघिदेखि पालना गरिएको छ । यही कुरा उपत्यकाको पहिचान बनेको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पञ्चशील क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिनुले विश्वभरको बौद्ध जगतमा तरङ्ग ल्याउँछ । पञ्चशील पालनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा शंका छैन । पुरै क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण वातावरण, भ्रष्टाचार तथा अनाचारको जरै उखिलिनु आमूल परिवर्तन हो । यो अभ्यासले अन्यत्र पनि प्रभाव पर्दै जान्छ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि पञ्चशीलको कुरा गरेको भए, त्यो जतिको लज्जास्पद अरू हुँदैन । प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ ०८:११
खिर्रोबाट खनखनी पैसा
झाडापखाला, छालाको रोग, पत्थरीको उपचारमा खिर्रोबाट बनेको औषधि प्रयोग हुँदै छ । लामखुट्टेको लार्भा नियन्त्रणमा पनि उपयोगी छ ।
मंसिर ११, २०७५ नारायण घिमिरे
काठमाडौँ — भारतीय सरकारको निम्तोमा कृषि इनोभेसनबारे छलफलका लागि नयाँदिल्ली जाँदा दुई दिनका लागि नेपाल पस्न भ्याएँ । वयोवृद्ध बुबाको आशिर्वाद थाप्न हवाई अड्डाबाट सिधै तनहुँको याम्पाफाँट हान्निएँ । ड्राइभर मेरै स्कुले साथी मालतीका भाइ कृष्ण परेछन् ।
मैले उनलाई सोधेँ, ‘बाबु, तिमी गाउँकै धनीको छोरा किन आफैँ केही नगरी अरूकामा मजदुरी गरेको ?’
‘खुरिखन्डै रातो माटोको पन्ध्र रोपनी टाट्नुमा खिर्रो बाहेक केही हुर्कँदैन । अर्को आठ रोपनीको चौटो छ । झाडी बाहेक क्यै हुन्न । म कसरी परिवार पालुँ ? बारीको घैया–कोदोले खान पुग्ने हैन ।’
‘सबै बारीमा खिर्रो लगाए कति बोट होला ?’ मैले सोधेँ ।
‘रोपनीको बीस–पच्चीस बुटाको दरले पनि पाँच सय त होला नि ।’
अलिकति गर्मी बढेका बेला हाम्रै गतिविधिका कारण माटो र पानी दूषित बन्छ, फोहोर पानी र माटोमा तुरुन्तै फैलिने प्रोटोजोवा, स्पोरोजोवा, सिजेला, अमिवाजस्ता किटाणु हात, पाउ, कपडा र अन्य सामानमा टाँसिएर हाम्रो भान्सा र ओछ्यानसम्म पुग्छन् ।
हामीले खाएको खाना वा पानीसँगै ती किटाणु हाम्रो आन्द्रामा पुग्छन्, शरीरले पखालामार्फत तिनलाई आन्द्राबाट तत्काल हटाउने कोसिस गर्छ । पखाला चालु गर्न शरीरलाई प्रशस्त पानीको जरुरत पर्छ । त्यो बेला शरीरबाट पानी मात्र जाँदैन, पानीमा घुल्ने इलेक्ट्रोलाइट जस्तै– नुन (सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन आदि), तत्काल शक्ति दिने चिनी, भिटामिनका साथै इन्जाइम पनि खेर जान्छ । नुन–चिनी–पानीको कमीका कारण मानिसलाई पखाला हुन्छ ।
पखालाले जब शरीर शिथिल हुन्छ, तब रोगसँग लड्ने शक्ति गुम्छ । त्यसैबेला हाम्रै शरीरमा भएका अवसरवादी पेथोजन जस्तै– ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजोन र फंगसले शरीरलाई संक्रमित गर्छ । सही उपचार नहुँदा ज्यान जान सक्छ ।
मानिसलाई डिसेन्ट्री (पखाला) हुँदा नुन–चिनी–पानी खाने चलन आउनुभन्दा धेरै पहिले खिर्रोको कमलो डाँठ र बोक्राबाट निकालिएको दूधजस्तो बाक्लो सेतो पदार्थ ‘लेटेक्स’ औषधिका रूपमा दिइन्थ्यो । त्यसैले खिर्रोको वैज्ञानिक नाम होलारिना एन्टिडिसेन्ट्रिका दिइयो । यसलाई रिटिया एन्टिडिसेन्ट्रिका पनि भनिन्छ ।
वेदमा उल्लेख भएअनुसार खिर्रोको बिरुवाको सम्पूर्ण भाग आयुर्वेदिक मूल्यको हुन्छ । सयौं वर्षदेखि विभिन्न जातजातिले खिर्रोको बोक्राको रस डायरिया, कोलेरा, डिसेन्ट्री, छालाको रोग, इपिलिप्सी (छारे रोग), पेट दर्द र छालामा किटाणुको संक्रमण हुँदा प्रयोग गर्दै आएको अभिलेख भेटिन्छ । आज पनि मिर्गौला, युटेरस, गलब्लाडर आदिमा पत्थरी हुँदा दिइने आयुर्वेदिक सप्लिमेन्ट (पूरक) मा खिर्रो हालेको भेटिन्छ ।
संसारका १२ प्रतिशत (भारतकै ११ प्रतिशत) मानिस कुनै न कुनै प्रकारका मिर्गाैला, युटेरस, गलब्लाडर आदिमा हुने पत्थरीको सिकार बनेका छन् । पुरुषमा महिलामा भन्दा ३ गुना बढी पत्थरी भएको भेटिन्छ । मिर्गाैलाको पत्थरीमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म विभिन्न प्रकारका क्याल्सियम अग्जालेट, १० देखि १५ प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम एमोनियम फस्फेट, ३ देखि १० प्रतिशतसम्म युरिक एसिड र ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म सिस्टिन भेटिन्छ ।
पिसाब एसिडिक भएपछि पत्थरी बन्न थाल्छ । पत्थरी हुन नदिन वा भएपछि त्यसलाई फुटाएर घटाउँदै लान कडा पत्थर बन्ने साल्टलाई जमाउन सघाउने युरिक एसिडलाई तटस्थ बनाउन अल्कलाइन खाना वा ड्रग जरुरी हुन्छ । अल्कलाइन खिर्रोको बोक्राको चूर्णलाई दहीमा मिसाएर खाँदा पत्थरी फुटाएर निकाल्न सकिएकाले यो आयुर्वेदिक औषधिमा परम्परागत रूपमै हाल्न थालिएको हो । पछि तिनै गुणका लागि खिर्राेको झोल र अन्य तत्त्व उपयोगमा आएका हुन् ।
आज लामखुट्टेका कारण मानिसमा हुने ज्वरो र रोग विश्व समुदायका लागि विशाल चुनौती बनेको छ । मुख्यत: क्युलेक्स र एडिस नामक दुई लामखट्टेका कारण संसारले भोगेको आतंक भयावह छ । जब राउन्ड वर्म संक्रमित व्यक्तिलाई क्युलेक्स नामक लामखुट्टेले टोक्छ, मसिनो जीवाणु क्युलेक्स लामखुट्टेमा सर्छ ।
संक्रमित क्युलेक्स लामखुट्टेले स्वस्थ मानिसलाई टोके मसिनो जीवाणु क्युलेक्स लामखुट्टेबाट स्वस्थ मान्छेमा सर्छ । मसिनो लामो धागोजस्तो जीवाणु शरीरभर फैलिएर आँखामा समेत संक्रमण गर्छ, जसलाई फिलारिअल भनिन्छ । फिलारिअलको त्यति सन्तोषजनक उपचार छैन ।
डेंगे भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिलाई एडिस एजिप्टी नामक लामखुट्टेले टोकेपछि लामखुट्टेमा डेंगे भाइरस सर्छ । एडिस नामक डेंगे भाइरसबाट संक्रमित पोथी लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्दा स्वस्थ मान्छेमा डेंगे भाइरस सर्छ । डेंगे भाइरसका कारण रगतको बाक्लोपन घट्ने र प्लेट्लेस बढ्ने गर्छ ।
यसले डेंगे ज्वरोमा देखिने अन्य धेरै समस्या निम्त्याउने गर्छ । डेंगे विरुद्ध प्रभावकारी खोप आइसकेको छैन । बस्तीहरूमा डेंगे भाइरसको संक्रमण देखिए वातावरण र पानीको सरसफाइ गर्ने र रोग सार्ने एडिस लामखुट्टेको लार्भा नष्ट पार्नु नै हालसम्मको उपलब्ध उपाय बनेको छ ।
खिर्रोको बोक्रा ताछी कोठाभित्र ३ दिनजति सुक्न दिएर पिँधेपछि चूर्ण बन्छ । २० ग्रामजति चूर्णलाई आधा लिटर पानीमा ४५ मिनेट उमाली कपडाले छानी आएको मनतातो झोललाई खिर्रोको एक्सट्रेक भनिन्छ । जब खिर्रोको १० एमएल एक्सट्रेकलाई ९० एमएल १ मिलिमोल एकक्वास सिल्भर नाइट्रेटको ७.५ पीएचमा ४८ देखि ५२ डिग्रीको तापक्रममा मिसाएर २ घन्टा छाडिन्छ, सुरुमा पहेंँलो हुने तरल पदार्थ खैरो रङमा परिवर्तन हुनथाल्छ ।
जब त्यो गाढा खैरो रंगमा परिवर्तन हुन्छ, तब त्यहाँ सिल्भर नेनोपार्टिकल बन्छ । यो सिल्भर नेनोपार्टिकललाई सेन्ट्रिफ्युज गरी पहिला मिथानोल, त्यसपछि डिस्टिल पानीले धोएर इयर–ड्राइ गरेपछि ठोस सिल्भर नेनोपार्टिकल तयार हुन्छ ।
सिल्भर नेनोपार्टिकल क्युलेक्स र एडिस नामक दुवै लामखुट्टेका लार्भा मार्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हो । सिल्भर नेनोपार्टिकलले मानिसलाई कत्ति पनि हानि गर्दैन । यो पर्यावरणीय दृष्टिमा सफा, स्टेबल र सर्वस्वीकार्य छ । मात्र ७२ घन्टामा सिल्भर नेनोपार्टिकलको ५.५३ पीपीएमको प्रयोगले एडिस र १९.२४ पीपीएमको प्रयोगले क्युलेक्स लामखुट्टेको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनसकेको छ ।
पछिल्लो समय खिर्रो आयुर्वेदिक महत्त्वको खाना र औषधिका अलवा सिल्भर नेनोपार्टिकलका लागिसमेत नयाँ पुस्ताको रुचिको वनस्पतिमा बनेको छ ।
ठूलो ‘भ्यालुएड’ दिन सक्षम खिर्रोको खेतीले सयौं नेपालीको जीवन कायपलट गरिदिन सक्छ । तर नेपालमा यसको सदुपयोग हुन कति दशक कुर्नुपर्ने हो ?
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ ०८:०६